DAAWO: Waxgarad & Siyaasiin shir kuyeeshay Boosaaso oo si adag u dhaliilay M/weynaha Puntland, kuna dhawaaqay.
October 12, 2019 NEWS 8
BOOSAASO(P-TIMES) – Shirar maalmihii u dambeeyey u socday qaar kamid ah waxgaradka beelaha gobalka Barri ayaa laga soo saaray baaq ku wajahan xaaladdaha Puntland, waxaana si adag loogu cambaareeyey Maamulka talada haya ee Puntland oo lagu eedeyey in ay gabeen dhammaan masuuliyadii loo xilsaaray.
Siyaasi Muuse Cali Jaamac oo kamid ah siyaasiinta gobalka Barri, ayna isku deegaan kasoo jeedaan Madaxweynaha Puntland oo wariyayaasha u akhriyey bayaanka ayaa sheegay in ficilada dawladdu ay yihiin kuwa gabi ahaanba hareer-marsan doonista Shacabka.
Muuse ayaa ku eedeeyey Xukuumaddu in aysan u adkeysan karin xaqqa ay shacabku u leeyihiin in ay aragtidooda shaqsiga ah ay muujiyaan, sidaas oo kalena la dhaliilo oo laga saxo khaladaadka ay ku jiraan.
21 sanno ka dib wuxuu sheegay in ay Puntland ku jirto marxalad ay ka hormarayaan maamuladii ka dambeeyey, isagoo sheegay in aytaasina ugu wacan tahay in madaxdeedu aysan danaheeda ka fakarin ee ay mar kasta xooga saran dhinacyo kale.
In ay Puntland kala maqan tahay, kuna soo koobantay labo gobal iyo bar ayey sheegeen, waxayna ku eedeeyeen maamuladii isaga dambeeyey kuwa aan diyaar u aheyn difaaca iyo xoreynta deegaanada maqan ee Puntland.
Heshiisyada lala galayo shirkaddaha Kalluumeysiga iyo kuwa dalalka Shisheeye ayay sheegeen in ay dhamaantood yihiin qarsoodi aan wax xog ah laga heynin ayna tahay in dabagal lagu sameeyo, waxaynas heegeen in ay Xukuumaddu ogoleyn arrimahaas.
In lala dagaalamo Midimada ummadda Soomaaliyeed oo la burburiyo dawladda Faderaalka Soomaaliya ayay sheegeen in aytahay mid ay leeyihiin Madaxda Puntland ayna mar kasta ku howlan yihiin.
Sidaas oo kale ,waxay sheegeen in aysii wadayaan kulamadooda waxayna cadeeyeen in aysan marnaba taageeri doonin isku day kasta oo looga hor imaanayo dawladda faderaalka, waxay sheegeen in Ilihii dhaqaalaha Boosaaso oo dhan ay la wareegtay dawladda Imaaraatka Carabta ayna tahay arrin weyn oo ay tahay in dadka oo dhan ay indhaha ku hayaan.
Odayaashan ku kulmay Boosaaso, ayaa ka dambeeyey ka dib markii ay Xukuumaddu dhawaan dhibsatay kulamo siyaasadeysan oo ka dhacay Boosaaso, kuwaas oo dhamaantood lagu diidanaa qaabka ay wax ku wado dawladda faderaalka.
Waa kuwa aan waxba ogayn nimanka Federal iyo Farmaajo Daba today, sida Jubbaland baa xaiyiraad la idin saarin.
Salaad Ali says:
Doqoni xin og xisaabse ma oga !!!!!!
KU:Salaad Cali Jeele waxaad soo qoraysid oo ad soo shaacinaysid waa in la fahmaa ujeedadaad ka leedahay.Bilaa ujeedo waxba laga fahmi mahayo.
Kuwaan iya oo aan la iska qaban, wax ka hagaagaya malaha Puntland. waxa qaska wadaa waa iyaga, waxana la oran karaa dad baa dabada ka riixaya.
Waa dad ay ka dahsoon yahiin arimha wada adag ee hortaagan maamulka puntlaan.Dadkaasu waxay u qabaan puntlaan in ay tahay dawlad weeyn oo leh dhaqaalo badan oo ay wax ku kala dabirto.Ninka Odaygaa ee leh puntlaan waxaa dhaafay maamul gobaleedyo la dhisay intay puntlaan jirtay kabacdi waa midaan waxba kala ogeeyn.Malaha kaasi waxuu ka mid yahay kuwa la yiraahdo xamar bay kasoo caro qaataan oo lagu soo yiri soo dumiya dawladiina iyo dalkiina oo intaas qaata.Odayaasha reer barigaa lama socdaan xaalado badan oo hortaagan maamulka puntlaan.Malaayiin doolara bay bixiyaan Ina farmaajo iyo Xassan Cali Khayre in lagu dumiyo maamulka puntlaan.Taasaa ka maqan dad badan oo xamar u heelan.War xamar waynuu ka soo guuray oo fadhi dambe inooguma harin ee aynuu danaheena ilaashano.Xamar ma aha xamartii hore oo dad gaara baa ku haya anagaa khaas u leh.Ha u lahaadeen ee bal ayagu ha ku heshiiyeen.
Waxay doonayaan inay ganacsigii doonyaha yar-yar ee shiraaca leh ee 100 sano ka hor laga tagay ku dhaggaanaadaan oo aan dekedda la weyneyn, airport ku shaqayn oo gobolka madax furasho u haystaan. Haddii la ay dawladdu ciidamadeeda kala baxdo buuraha gal-gala oo la yiraa reer bari difaaca boosaaso laba maalin ka bacdi waxaa qabsanaya argagixisada. Marka kuwaan ciidan ma keeni karaan oo dal ma difaaci karaan, ganacsi casri ah ma samayn karaan oo waa la ogaa sida gobolkaasi ahaa dagaallada ka hor. Waxaan bagaash carabta laga keeno ahayn ma yaqaanaan. Waxaan xasuusannaa inay diidanaayeen in xataa laamiga dheer la dhiso markii dawladdii dhexe jirtay. Marka kuwaan lama dhegeysto haddii ay nabadgelyada khal khal geliyaana waa in loo xiiraa markaa ilaa 10 sanaa laga nasanayaa
Balaayo ha qaado madax ma joogto aweesooyin baa jooga xaqa islam iyo masaakiinta Allah haka soo saaro iska cesha odayaasga nadaxda isku sheegaya
War Odayaasha farmaajo iyo Khayre u shaqaynaya sadex bilood oo deg deg ah ha loo jaro jeelka Bosaaso ee qabowga badana geeya siyaasada ha ka nasteene